ढाड चिलाए यसरी कन्याउने कि ! (भिडियो) « Nagarik Khabar
ढाड चिलाए यसरी कन्याउने कि ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति : 16 October, 2020 8:02 pm
एजेन्सी । आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा जेसीबि मेसिनको भिडियो भाइरल भइरहेको छ । यस भिडियोमा ठूला ठूला सडक बनाउने र भवनहरु भत्काउनका लागि प्रयोगमा आउने जेसीबी मेसिनले एक वृद्धले आफ्नो चिलाएको ढाड कन्याइरहेका छन् । यस भिडियालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले धेरै नै सेयर पनि गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ४१ सेकेण्डको यो क्लिपमा ती वृद्ध निर्माण स्थलमा उभिएका छन् । उनी कपडाले आफ्नो ढाडमा कन्याइरहेका हुन्छन् तर यसरी कन्याउँदा उनको चिलाइबाट राहत महशुस गर्न सकिरहेका हुन्नन् । त्यपछि ती व्यक्ति जेसीबी नजिक जान्छन् र जेसीबीको दाह्राले उनी ढाड खन्याउन थाल्छन् ।
भिडियो खिच्ने व्यक्ति ठूलो आवाजका साथ हाँसिरहेको सुनिन्छि । सामान्यतः दैनिक जीवनमा यस्तो दृष्य कमै देखिन्छ । आश्चर्यको कुरा त यति धेरै गह्रुङ्गेधातुले उनको शरीरलाई हानी पुर्याउनुको साटो राहत दिइरहेको छ । ती व्यक्तिको ढाड कन्याएर जेसीबी संचालक पुनः आफ्नो खन्ने काम जारी राख्दछन् ।